Ukuhamba EYurophu On A Tips Budget | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Ukuhamba EYurophu On A Tips Budget
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 10/04/2021)
Ukuhamba eYurophu kwi mali kungumngeni! kunjalo, ke kunokwenzeka ukuba nje wenze uphando sakho amalungiselelo ngokuhlakanipha uhambo lwakho. Kusenokuba ikushiye malini ungagcina ngokuthatha indlela ilungelo yokuthutha okanye ngokukhetha kuyiwa zitshiphu. Themba us; kukho uhlahlo lwabiwo-friendly ezizezinye ukuze yonke into kunye uhambo lwakho - evela iindawo ezinika umdla zotyelelo izinto zokuhamba ukuya ukudla ukuba indawo yokuhlala.
Khumbula, abahambi kwi mali asingabo "abahluphekayo:"Engu unekhono! Ngoko ke ngaphambi kokuba uhambe nokuzisizela, cinga yonke imali uya kubasindisa ngoxa besenza izinto ezimangalisayo. ibhajethi yakho lilinganiselwe anqabileyo; ke, kufuneka uliphathe ngenkathalo. Nanga amacebiso zethu phezulu zohambo eYurophu kwi mali:
Uhlela Indlela Yakho
Yakha uhambo lwakho phambi nantoni na. Akukho mathandabuzo, umelwe kukuba uluhlu lwe kufuneka-uvakashele sendaweni European. ngokusengqiqweni, awukwazi Mandingabaveleli na ke bonke xa uhamba eYurophu kwi mali, ingakumbi xa ixesha sakho njengoko kulawulwa ngolu ibhajethi yakho. Ngoko, kunokuba ukuzityhala ukubabona bonke, pick phezulu yakho emibini okanye emithathu. Ngoku khangela imaphu ukuze ubone ukuba imizi ukuba bangela kulula ukudibanisa ku, ke ngoku ntoni nezinye dolophu kuloo ndlela.
Umzekelo, usenokuba nomdla behambela EParis no Amsterdam. Hlola indlela, yaye uya kubona ukuba Brussels sisixeko ephakathi ezimbini! ngokukhetha imizi adibanayo, okanye ezo ziphakathi ezimbini iindawo zokuphupha, ungafumana bang ngaphezulu theme yakho.
Ufumana amazinga kakhulu xa uzibekele hotel okanye amagumbi ihostele in advance. i ngaphambili, ngcono. Khetha ngobulumko indawo yakho.
Nangona abandwendweli kwiihotele star-5 kuthetha intuthuzelo epheleleyo kunye okuphambili, ukuba awunguye ukhetho smart xa sisebenzisana mali ekhaya. Ngaphezu, ngokuhlala ngendlela ehotele ezibizayo iya kuba yinkcitha imali yakho, ikakhulu xa uhambo lwakho lubandakanya ngebhayisekili nokuphononga isixeko. Oku kuthetha ukuba uza kuphela ukuba usebenzisa igumbi le ngozi kwaye ndichitha imihla yakho uze malunga.
Ukuba ufuna ukugcina, ukuze uhlale othile wendawo simahla ngokundwendwela Exchange hospitality. Ezinye indawo cheap ziquka kuleya ukuba izibonelelo zinikeza yokulala-style. lokuqasha Room on ezimarikeni online ezifana Airbnb nayo efanelekileyo zohambo eYurophu kwi mali.
Yitya Like a Local xa uhamba eYurophu kwi mali
iyathanda ezizwe yonke eYurophu. Kodwa ukuba wena uhamba eYurophu kwi mali, into efanelekileyo yokwenza kukuphepha ukutya kwiindawo ezibiza kakhulu zabakhenkethi. Musa ukuvumela amatyala yokutyela phula ibhajethi ukutya kwakho.
kunokuba, udle njenge lendawo kwaye ufumane yenkcubeko real amava. nkomo lokutya kunye yesitalato yonke imizi yaseYurophu, yaye nguwe iindawo yintlawulelo cuisine yokwenene. Yaye ke inxenye ilungileyo kukuba ziya kunokubiza kuphela euro ambalwa. Ukuba ufuna ukugcina kwi izidlo, hit evenkileni. Ukuba angene kwigumbi unendlela ukupheka, ukuthenga izinto ukutya ungakwazi ngokulula ukwenza.
Sleeping kuloliwe phakathi kwiindawo kuba mhlawumbi omnye iincam esizithandayo kubantu abahamba eYurophu kwi mali. Kunokuchitha iiyure emini oxabisekileyo sisendleleni, bakhetha ukuya kwi ngololiwe wasebusuku. Kusenokuba ikushiye njani sitshiphu ngayo ngaphezu kubhukishelwa ehotele ubusuku. Uqinisekisa, uya kuphoswa imbonakalo yelizwe, kodwa uya kuzidla uze uvuke kakuhle waphumla kwisixeko entsha!
Ready to start traveling in Europe on a budget and ncwadi ibe uloliwe? Amatikiti Book Isitimela ekuqaleni uze ufumane amaxabiso phezu kweetrone!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-budget%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#mali #traveleurope budgettravel cheaptravel Gcina imali